Kurwisa muGulf: Saudi Arabia inopindura, iyo Emirates "yakangwarira kwazvo" - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
HOME » KWEZVISUNGO Kurwisa muGulf: Saudi Arabia Inopindura, Emirates "Akangwarira" - JeuneAfrique.com
Nekuparadzwa kwemachina emafuta kubva kuEmirati coast, uye ipapo Houtis yakataura dhoni yekurwisa mapaipi maviri eSaudi, Gulf yakaona vhiki yekumhanya kukuru. IUAE inonyaradza, asi Saudi Arabia inosimudza inzwi.
Drones akarova mapaipi maviri ane Aramco Chipiri chepiri. Iko kutengesa kwaitorwa ne iyo Houtis, sangano reuto reShiite iyo iyo sangano rinotungamirirwa neSaudi Arabia rinorwisana kubva ku2015 muYemen. Musi weChina, hurumende dzeSaoudi dzakapomera pachena pachena Iran yekukonzera chiitiko chacho.
>>> VERENGA - Gulf on the alert after the mysterious drone attack in Arabie saoudite
"Kutambudzwa uku kwegandanga, kwakarayirwa nehurumende yeTehran uye kuurayiwa neHoutis, kunonetsa kuenderera mberi kwezvematongerwe enyika," akadaro Prince Khalid Ben Salman, Mutevedzeri weZviviri. Mhirizhonga yemhepo inotarisana ne "Hiti-vakavimbika" zvinangwa zvehondo zvakaitwa musi weSvondo mangwanani mune imwe nzvimbo yevanhu vakawanda yeSania, guta guru reYemen, zvichiguma nekufa kwevanhu vanoverengeka. Kune chikamu chayo, zuva nezuva Arab News, pedyo nesimba, yakadanwa muhurukuro yake yezuva kune kuuraya kunopikisana neIran.
- Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) Dai 16, 2019
"Saudi Arabia inonyanya kukoshesa kurwisana neIran munharaunda uye zvichida hainzwi sokunge yakaratidzwa sediki Gulf countries, kuongorora Jeune Afrique Elizabeth Dickinson, nyanzvi yeArabian Peninsula ku International Crisis Group. Asi pakupedzisira, kukura kwekukakavadzana hakuzoshandisi zvido zveumwe uye kunogona kuumba kuputika kwemazuva matsva munzvimbo isina kusimba. "
Abu Dhabi zvakare "akaenzana"
Cameroon - Joseph Dion Ngute kune secessionists: "Mutungamiri Paul Biya, baba vako, vakamirira iwe kumba. Uyai musingatyi »